RDC: Mandroba tranon’olona ireo miaramila tsy mandray karama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Avrily 2009 8:20 GMT
Ny herinandro lasa teo dia nolazain'ny fampielezam-peo Radio Okapi fa mpikambana ao amin'ny FRADC, miaramila any Repoblika Demôkratika Kongo, no nandroba trano maro tany Kirumba, 200km any avaratry Goma. Ireo miaramila, izay tsy nandray karama nandritra ny 3 volana izay, no mangalatra vola, telefona sy ireo fitaovana eletronika:
Fandrobana mandeha ho azy ny alin'ny alahady hatramin'ny alatsinainy tao Mbogho ao an-tanànan'i Kirumba, 200km any avaratry Goma. Trano 21 no voaroban'ireo lehilahy mitondra fitaovam-piadiana sady manao akanjo miaramila, araka ny loharanom-baovao avy amin'ny tompon'andraikitra any an-toerana tao amin'ny radiokapi.net.
Eo an-kilan'izany, ao an-tanànan'i Kayna, 150km any avaratry Goma, ao amin'ny faritry Lubero, dia tsy ma,kany an-tsaha intsony ny olona efa ho tapa-bolana izay noho ny afitsok'ireo miaramila FARDC. Araka ny fanamarihan'ireo tompon'andraikitra any amin'ireo toerana 2 ireo dia efa nandritra ny andro maromaro izay ireto miaramila ireto no mivelona amin'ny hatsembohan'ny olona satria hoy izy ireo efa tsy nandray karama ihany efa ho 3 volana izay.
Ao amin'ny bilaogin'i Alex Engwete, maro no miresaka ity tantara ity.
Manankiana ny tsy fahampian'ny fahatokisana amin'ny tafika i Wavre izay mampijaly ny olona raha tokony hiaro azy:
Tokony havaozina hatrany amin'ny fotony mihitsy ny tafika. Toe-tsaina vaovao, fandraisana andraikitra, fanajana sy fanehoam-pitiavana amin'ny vahoaka. tsy olona hafa amin'ny sivily ny miaramila, ary koa tsy natao hiaro ny fitondrana foana izay hita fa tsy mahavita azy. Zzava-dehibe sady tena ilaina ny fandoavana ny karaman'ny miaramila. Kanefa tena mahafantatra izany ve ny mpitondra antsika??? Manahy aho, satria ireo mpitondra ireo matetika dia mahazo fahefana amin'ny alalan'ny olona mirenireny foana sady noana no tsy mpanara-dalàna, tarihan'ny manam-boninahitra tsy hanino tsy haninona, loham-bola, saro-tahotra sady mpanao afera.
Raha tsy misy tafika tena voakajy tsara sady manara-dalàna dia anarana fotsiny ny demokrasia ary endrika ivelany fotsiny. Na dia eo aza ny tombony ananantsika amin'ny isa dia hitohy hiforitra eo anoloan'ny tafika kely sy vitsy an'isa ny miaramilantsika.
Efa an-taonany maro dia niaina tao anatin'ny horohoro ataon'ireo miaramila vitsy an'isa, milisy tsy manara-dalàna ny mponina mipetraka any amin'ny faritra andrefana any Congo. manazava i Gangoueus:
Ratsy vintana izay teraka tany amin'ny faritra andrefan'ny RDC. Andriamanitra iza no hivavahan'ny olona any? Raha tsy ny Rwandais no maka ny volan'ny olona atao takalon'aina dia ny Ougandais. Raha tsy ny Ougandais indray dia ireo mpioko ao amin'ny Nkinda na ny anankiray amin'ireo sefo milisy. raha tsy izany dia ny tafika Congolais no mampijaly azy ireo. Inona àry tokony hatao?
Mody gaga manoloana ny zava-misy isika kanefa hiaraha-mahalala fa efa hatramin'ny ela, raha ny marina dia hatramin'ny nifaranan'ny hery ho an'ny vahoaka dia tsy nanana tafika intsony ny RDC, ataon'ny miaramilantsika lasibatra ny vahoaka izay tokony harovany…
Miaro ny FRADC i Bakunde ary milaza ny asan'ny Katanga :
Lazainareo fa mpangalatra ny FARDC dia ataoanareo ho inona koa avy eo? Ankoatry ny fangalarana madinidinika ataon'ny miaramila congolais miisa 100 000 dia inona indray izao no hatao resaka? mampalahelo raha firenena lehiba tahaka an'i Congo no tsy manana zavatra horesahana afa-tsy izany tato anatin'ny 2 taona. Izay ihany no mba fantatrareo mikasika an'i Congo. Jereo ange ny miaramila Katangais, firy taona no nijanonany tany Angola kanefa tsy noresahana ny momba azy ireo afa-tsy ny fotoana niadiany ihany…
Mamaly i OURAGAN :
Mampalahelo ahy i Bakunde izay milaza ny tafika Congolais ho filamatra, mendrika sady matanjaka…manantena ianao fa hitovy aminao daholo ny vahoaka congolais rehetra ka handoka ny zava-misy izay hita fa mahamenatra ary hirehareha amin'ny miaramilanao 100000 izay manala baraka amin'ny lafiny rehetra na amin'ny maha miaramila azy na amin'ny asa ataony izay mandroba sy manolana ny vahoaka raha tokony hitandro ny filaminana. Tsy misy tokony hireherehana amin'ny tafika eo ambany fitondranao.
Alex Engwete, mamaly an'i Bakunde, no mino fa ny polisy any Katanga no tsy mendrika:
…fantatro ireo miaramila Katangais ireo. Notarihan'ny kolonely Tshimpola, ilay namono an'i kolonely Tshatshi, io rezimanta io. Mpandroba sy mpamono olona ry zareo – tahaka ny miaramila congolais rehetra ihany. teo amin'ny lalana Pumuzika any aminay any Kisangani no nisy mpamono olona anankiroa – mbola tadidiko ny anaran'ny anakiray: serza Venant – novonoin-dry zareo ny dadan'ny namako, raim-pianakaviana maro anaka, izay tsy nanaiky ny hanomezana azy roalahy ireo ny bisikeletany Raleigh… Noho izany tsy tsaho mihitsy ny zavatra ambara mikasika ireo miaramila Katangais ireo…
Novonoin'ny kolonely Tshimpola ny kolonely Tshatshi. Ity farany, nitarika tao amin'ny vondrona faha3 ny ANC (Armée Nationale Congolaise), izay tonga tao amin'ny biraon'ny kolonely Tsimpola nangataka azy handidy ny miaramilany hametra-piadiana hanombohana ny fampidirana azy ireo ao amin'ny ANC tany Kitona. Tonga tany tsy nisy mpiambina anefa i kolonely Tshatshi, tsy nitondra fitaovam-piadiana, niaraka tamin'ny mpamiliny. Satria lian-dra ny kolonely Tsimpola dia novonoiny tao amin'ny biraony ny kolonely Tshatshi, avy eo izy nivoaka namono ilay mpamily! Tokony ho tamin'ny 10 ora maraina! Noho izany, aza miteny aminay momba ny miaramila Katangais ka milaza azy ireo ho tahaka ny manana foto-pisainana samoray!
namaly an'i Alex i Bakunde, nanoratra, ‘ny olomangan'ny fahavalontsika dia tsy olomangantsika”.”
alex, afaka miaro ny hevitrao ianao kanefa aoka tsy hanararaotra. io miaramila antsoina hoe Tsimpola io, kolonely ao amin'ny tafika congolais, dia olomanga ho an'ny mpanara-dia azy, ho an'ny Takangais ary ho an'ny rehetra miara-manompo aminy ao amin'ny tafika.
Alex, afaka miaro ny hevitra ianao kanefa aoka tsy hanararaotra. Io miaramila be herim-po io, ny kolonely Tsimpola, dia olomanga ho an'ny vahoakany, vahoaka any Katanga ary koa ho an'ny rahalahany rehetra ao amin'ny tafika.